मेस्सीको रेकर्डमा रोनाल्डोको हमला ! - NA MediaNA Mediaमेस्सीको रेकर्डमा रोनाल्डोको हमला ! - NA Media
मेस्सीको रेकर्डमा रोनाल्डोको हमला !
च्याम्पियन्स लिगमा फेरेन्कभारोस विरुद्धको खेलमा गरेको गोलसंगै युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले यस प्रतियोगितामा बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सीको किर्तिमान बराबरी गरेका छन्। रोनाल्डोको पहिलो हाफको गोल उनको च्याम्पियन्स लिगमा ७० औं होल गोल थियो, जुन एक किर्तिमानी गोल हुन पुग्यो।
तुलनात्मक रूपमा आफूभन्दा कमजोर टिमसँगको खेलमा एन्ड्रिय पिर्लोको टोलीण १९ औं मिनेटमा मायर्तो उजुनीको गोलबाट पछि परेको थियो। तर त्यसको १६ मिनेटपछि नै रोनाल्डोले युभेन्टसका लागि बराबरी गोल गरे। खेलको इन्जूरी समयको दोस्रो मिनेटमा अल्भारो मोराटाले गोल गर्दै युभेन्टसलाई जित दिलाए।
यस गोलसँगै रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगको होम गेममा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने किर्तिमान बराबर गरेका छन्। यसअघि यो रेकर्ड लियोनल मेस्सीको नाममा थियो। अब यी दुबै खेलाडीले एस प्रतियोगिताको होल गेममा ७० गोल गरेका छन्।
समग्रमा, रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा १७१ खेल खेल्दै १३१ च्याम्पियन गोल गरिसकेका छन्। रियाल म्याड्रिडका पूर्व स्ट्राइकरले ५ पटक उपाधि जितेका छन्।
अब तीनपटकसम्म लगातार लाइसेन्सको ट्रायल दिन पाइने